Chess 🥇 Tinye ma kpọọ Chess na Emulator.Online
Chess: Etu esi egwu egwu site na ukwu 🙂
Iji kpọọ Chess n'ịntanetị n'efu, soro usoro a site na ntuziaka:
Nzọụkwụ 1. Mepee ihe nchọgharị ị họọrọ ma gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke egwuregwu Emulator.online.
Nzọụkwụ 2. Ozugbo ị banyere websaịtị, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo. Ikwesiri ime kụrụ egwuregwu.
Nzọụkwụ 3. Ikpo okwu na-enye gị ohere ịhọrọ n’etiti iji rọbọt egwuri egwu ma ọ bụ igwu egwu megide onye ọzọ gị na ya nọ. Nwere ike "Tinye ma ọ bụ wepu ụda", họrọ"Ọkwa nke egwuregwu"Tinye oyiyi ahụ na"ihuenyo zuru oke"na njikere !.
Nzọụkwụ 4. Ozi gị ga-abụ ịhapụ eze n’enweghị ngagharị ọ bụla, na-echeta mgbe niile iwu nke egwuregwu ahụ. .B.
Nzọụkwụ 5. Mgbe ịmechara egwuregwu, pịa ntọala iji kpọọ ọzọ.
Leekwa Iwu Chess Official ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe iwu mba ụwa nke egwuregwu a ma ama.
Gịnị bụ Chess?
Chess bu a egwuregwu bọọlụ ntụrụndụ na asọmpi maka egwuregwu abụọ. A na-eme ya na bọọdụ okirikiri wee kewaa ya na 64, alternately nwa na ọcha. N’akụkụ ya, ibe iri na isii ahụ dị na akụkụ nke ọzọ na otu ọnụ ọgụgụ oji ojii.
Onye ọ bụla ọkpụkpọ nwere ikike ịmegharị n'otu oge. Ebumnuche nke egwuregwu ahụ bụ ịlele onye mmegide ahụ.
Ọ bụ egwuregwu chọrọ echiche ziri ezi na atụmatụ, anaghị agụnye mmewere nke chioma, belụsọ ịbịaru agba na mbido egwuregwu ahụ.
Na cheesi osisi nwere Ohere 64 kesara na ogidi 8 (vetikal) na 8 ahịrị (kwụ), nke ọ bụla nwere square 8. Houseslọ ndị ahụ gbara ọchịchịrị na ọkụ. Akụkụ mbụ na aka ekpe nke mbadamba kwesịrị ịbụ square ojii na akụkụ ikpeazụ n'akụkụ aka nri ka square ọcha.
Ejiri kọlụm ọ bụla site na leta na-esite na ya A ka H, mgbe e nyere ahịrị ndị nwere nọmba site na 1 ka 8 . N'ụzọ dị otú a, a na-ahọpụta akara nke ọ bụla na mkpụrụ akwụkwọ na nọmba kwekọrọ na kọlụm ya na ahịrị (a1, b6, f5, wdg). Nke a bụ usoro nhazi ọkwa na asọmpi gọọmentịs.
Onye ọ bụla ọkpụkpọ nwere Akụkụ 16, na-ekewa n'ime ìhè na ọchịchịrị. Mpekere ndị ahụ, n'usoro nke uru:
Cheta na: Fọdụ ndị egwuregwu chess anaghị ewere pawns dị ka iberibe. Kpụrụ iberibe nwekwara ike ịdị iche, ọbụnadị dabere n'ọnọdụ nke ibe na bọọdụ ahụ.
Na mbido egwuregwu ahụ, a na-ekesa iberibe na mbadamba dị ka ndị a: a na-etinye mpempe ọcha na ahịrị 1, na-echebe ya ahịrị nke pawns n'usoro 2, mgbe nwa iberibe nọ n'ahịrị 8 na pawns ya na 7. Rịba ama n'okpuru:
Ndị mbido na-agbagukarị ọnọdụ nke eze na eze nwanyị, mana iji mee ka ọ dị mfe, cheta nke ahụ ndị Queen na-amalite egwuregwu mgbe niile site na ogwe nke otu agba (White Queen na White House, Black Queen na Black House).
Ya mere, eze nwanyi ocha noo square D1, ebe nwanyị ojii ahụ nọ na square D8. A na-eji nhazi a mee ka a ghara ịwakpo Eze n'ụzọ ziri ezi na oghere ahụ, dị ka ọ ga-adị ma ọ bụrụ na nwunye eze na-emegide ya nọ n'otu faịlụ ahụ.
E kewara bọọdụ ahụ nku abụọ:
Nkume Eze Nwanyị
A na-akpọ iberibe ahụ aha nku ya. Thelọ elu dị na a1 y a8, dịka ọmụmaatụ, a na-akpọ ha Uwu-Nwanyị, mgbe ụlọ elu dị na h1 na h8, Torre-Rei. Otu ihe ahụ na - eme n'akụkụ ndị ọzọ, ọbụnakwa na pawns, nke akpọrọ aha ibe ha chebere. Ndị pawn na e2 bẹ eze-ụlo, dụ ree d2, eze nwaanyị ji ụkwụ na aka, na-etinye aka na ya f2 a na-akpọ eze pawns-bishop na pawn in c2, eze nwanyị nke pawns-bishop, na na.
Akụkọ banyere Chess
Chess bụ egwuregwu ochie dị na, maka afọ niile ọ dịrị, enwere ọtụtụ akụkọ metụtara ya na mbido ya.
Isi nke Chess na India
Akuko mbu emere n’uwa nile bu nke India. E nwere obere obodo akpọrọ Taligana, na nwa nwoke nke ndi dike Rajah nwụrụ n'ọgbọ ọbara.
Rajah dara mbà n'obi, ọ nweghịkwa ike ịkwụsị ọnwụ nwa ya nwoke. Nnukwu nsogbu bụ na ọ bụghị naanị na rajah nwụrụ obere obere, kamakwa o leghaara alaeze ya anya. Ọ bụ naanị oge tupu alaeze ahụ adaa kpamkpam.
Hụ ọdịda nke alaeze, a brahmin aha ya bụ Lahur Sessa, otu ụbọchị gakuru eze gosi ya mbadamba nke nwere ogige 64, oji na ọcha, na mgbakwunye na ọtụtụ mpempe ndị ji ikwesị ntụkwasị obi na-anọchi anya ndị agha nke ndị agha ya, ndị agha, ndị agha, ndị agha, ndị ọkwọ ụgbọ elephazi, ndị isi vizier na Rajah n'onwe ya.
Onye ụkọchukwu ahụ gwara rajah na egwuregwu dị otú ahụ pụrụ ime ka mmụọ ya dị jụụ nakwa na ọ ga-agwọ ịda mbà n'obi n'ezie.. N'ezie, ihe ọ bụla Brahman kwuru mere eme, ndị Rajah chịrị alaeze ya ọzọ, wepụ nsogbu ahụ n'ụzọ ya.
Ọ bụ ihe omimi ka ihe niile siri mee, otu osisi nke nwere mwepu iwe nke rajah. Dị ka ụgwọ ọrụ, e nyere brahmin ahụ ohere ịjụ maka ihe ọ chọrọ. Na mbụ, ọ jụrụ onyinye ahụ, ebe o chere na ya erughị eru inweta ụdị onyinye ahụ, mana site na isi ọnwụ nke Rajah, ọ rịọrọ obere arịrịọ.
Nanị Brahmin rịọrọ maka ọka wit maka akpa square na bọọdụ, abụọ maka nke abụọ, anọ maka nke atọ, asatọ maka nke anọ na na ruo mgbe etiti ikpeazụ. Ihe efu nke arịrịọ ahụ masịrị raja ahụ.
Mfe bi akyi no, mewaree Brahmin a na m’awofo nnim no no. Mgbe ha gbakọchara ọka ole ha ga-enye ya, ha chọpụtara na ọ ga-ewe ihe ubi nile nke alaeze ahụ ruo puku afọ abụọ na-enweghị atụ iji mezuo ihe ụkọchukwu ahụ kwuru.
N'ịbụ onye ọgụgụ isi nke brahmin kpaliri, rajah kpọrọ ya ka ọ bụrụ onyeisi vizier (ụdị onye ozi, onye ndụmọdụ nke rajah) nke alaeze ahụ, Sessa gbaghaara ya nnukwu ụgwọ o ji ọka wit.
N'ezie, ihe brahmin ahụ nyere rajah abụghị egwuregwu chess, ọ bụ nkata, otu n'ime ndị isi iche nke oge a na egwuregwu nke cheesi.
Mmalite nke Akụkọ ifo
Ohere di egwu ozo n’abia na akuko di iche iche banyere mmalite cheesi bu na Ares, Chineke nke agha, gaara eke osisi iji nwalee usoro agha ya (nke dị oke oke, ebe ọ bụ na Ares amaghi na ọ nwere usoro na ọgụ ya, ọ na-eme ihe ike, na-awakpo na-enweghị oke ọtụtụ oge).
Kaosinadị, akụkụ ọ bụla na bọọdụ ahụ nọchiri anya akụkụ nke ndị agha ya, o mere, ruo mgbe Ares nwere nwa nwoke nwere mmadụ, wee nyefee ya isi egwuregwu ahụ. Mgbe nke ahụ gasị, egwuregwu ahụ gaara erute na ihe ọmụma banyere mmadụ.
Mgbanwe nke Chess na akụkọ ihe mere eme
A maara nke ahụ tinye 1450 y 1850, cheesi malitere inwe mgbanwe mgbanwe anya banyere ihe anyi maara taa. Ọ bụ n'oge a ka mpempe dị iche iche nwetara ngagharị nke taa anyị maara, n'ezie, mmegharị niile na mpempe ndị a sitere na Chaturanga.
Enyí (bishọp nke bu ụzọ) nwere ike ịmegharị na mbido abụọ. Ndị vizier (onye buuru eze nwaanyị) bụ naanị ụlọ na diagonals. Ndị ji ụkwụ aga ha enweghị ike ịkwaga n'ama abụọ na mbugharị mbụ ha ma ụlọ mkpochapụ adịbeghị. Wngwọ ụmụaka enwere ike ịkwalite ha na vizier, nke bụ akụkụ kachasị ike, mgbe ọ gbasịrị ụkwụ, n'ihi ntakịrị agagharị.
A malitere iwu iwu chess anyị maara taa 1475, ị maghị nnọọ ebe mmalite a dị. Fọdụ ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme dị iche na nke abụọ Spain na Italytali.
Ọ bụ n'oge a ka ndị ji ụkwụ na-agagharị agagharị nke anyị maara taa, nke mejupụtara ịmegharị ụzọ abụọ na njem mbụ ha na ịnara ndị ọzọ na-agagharị. gafere .
N'oge ahụ, mmegharị ọhụrụ nke bishọp na eze nwaanyị a kọwakwara ha na, nke ka mkpa bụ, eze nwanyị ahụ ghọrọ akụkụ kachasị mkpa na egwuregwu ahụ, ebe ọ bụ naanị ya nwere ike ịkwaga ebe ọ bụla ma gaa n'ihu ma ọ bụ laa azụ n'ọtụtụ ebe ọ chọrọ.
Mmeghari nke ibe ndi ozo, ya na iwu ndi ozo gbasara cheesi, ka agbanwere na ntaneti n'etiti etiti. XIX, na iwu ndị a ka dị taa.
Maka ndị na-egwu chess dị ka ihe ntụrụndụ, ma ọ bụ maka ndị nkịtị n'egwuregwu, a na-egwu egwuregwu chess n'etiti ndị egwuregwu abụọ n'otu bọọdụ.
Agbanyeghị, n'egwuregwu a, egwuregwu anaghị eme otu a, yana enwere otutu modal ka iche n'echiche na mbu. Malite na oge nke egwuregwu, nke nwere ike ịdị iche site na minit ole na ole ruo awa ma ọ bụ ụbọchị ole na ole ka ekwupụta ya, mgbe ụfọdụ na-enweghị onye ọkpụkpọ na-egbu.
Egwuregwu ndị ọkachamara na-egwu na-ejikarị oge elekere anya oge niile. N'ọnọdụ ụfọdụ, onye ọkpụkpọ nwere ike igwu egwu karịa otu onye mmegide na mbadamba dị iche iche. Tebụl anaghị adịkarị square ma enwere usoro cheesi nwere ihe ruru iri atọ na isii. Nwere ike igwu egwu chess na-ahụghị bọọdụ!
Ugbu a, anyị ga-ahụ dị iche iche chess modalities na ọtụtụ ohere iji mee ka egwuregwu a bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma sie ike.
Klas Chess Egwuregwu
Ọ bụ omenala chess mode, nke ndị egwuregwu na-ezute ihu na ihu n'ihu mbadamba.
Ọ bụ ọnọdụ ndị egwuregwu na-eji kọmputa ejikọrọ na Internetntanetị ma ọ bụ na netwọk mpaghara, na-agbaso otu iwu dị ka omenala cheesi.
Ọ bụ mgbanwe nke ọdịnala chess nke enwere 15 nkeji oge kachasị oge maka ọkpụkpọ ọ bụla. Na ọnọdụ a, ndị egwuregwu anaghị achọ ide ọnụ ha.
N'out oge Chess Game
N'ime egwuregwu chess n'otu oge, onye na-agba bọọlụ cheesi na-egwu egwu karịa otu onye mmegide na mbadamba dị iche iche.
Na ọnọdụ a onye ọkpụkpọ adịghị lee mbadambaMa obu site na iji ntaneti ma obu na ulo di iche. Onye kpuru ìsì Ọ dabere na ebe nchekwa nke onye ọkpụkpọ chess, onye ga-achọ ọkwa nke bọọdụ ahụ ma mee nyocha uche ya.
Chess Nzipu ozi
El akwụkwọ ozi ma ọ bụ leta cheesi, dika esi mara ya, bu cheesi mode eme remotely, site na mmekorita. Na mbu, ndi n’egwuregwu chess zipụrụ onyinye ha site n’akwụkwọ ozi ma ọ bụ postkaadị, mana oge na ọganiru na teknụzụ, n'oge a ọ ga-ekwe omume iji ozi ịntanetị, na-ebelata oge ichere maka nzaghachi.
Echiche maka ọnọdụ a dị iche na ọkwa chess ọdịnala, ọkachasị n'ihi na ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile na-eme ya, ndị na-asụ asụsụ dị iche iche. Epistolary chess nwere nke ya mba ụwa(ICCF).
Iwu Chess Official
IKPỌRỌ IWU EGO
1. Ebumnuche nke egwuregwu cheesi.
1.1 Egwuregwu chess na-egwuri egwu n'etiti ndị iro abụọ na-ebugharị iberibe na bọọdụ a na-akpọ 'chess osisi'. Ọ player na-acha ọcha iberibe amalite egwuregwu. Ekwuru onye na - egwu egwu ka o nwee ike igwu egwu mgbe emegoro onye na - emegide ya. (Lee Nkeji edemede 6.7)
1.2 Ihe mgbaru ọsọ nke ọ bụla ọkpụkpọ bụ na-etinye eze nke onye iro ya 'na mberede' n'ụzọ nke na onye iro ahụ enweghị usoro iwu ọ bụla. A na-ekwu na onye ọkpụkpọ nke ga-emezu ebumnuche a ga-egbu eze nke onye iro ya ma merie egwuregwu ahụ. A naghị ekwe ka ị hapụ ma ọ bụ tinye eze gị na mwakpo, ma ọ bụ ijide eze nke onye mmegide. Onye mmegide ahụ nke eze ya na ya na-akwụ ụgwọ furu efu egwuregwu ahụ.
1.3 Egwuregwu bụ tie ọ bụrụ na ọ na-ebute ọnọdụ ebe ọ dịghị onye ọkpụkpọ nwere ohere iji chọpụta ego.
2. Ọnọdụ izizi nke iberibe ahụ na bọọdụ.
2.1 Ngwongwo a mejuputara na netwok nke 8 × 8 na 64 n'ámá alternately ìhè nhata (n'ámá 'ọcha') na ọchịchịrị (n'ámá' 'acha').
A na-etinye bọọdụ n'etiti ndị egwuregwu ahụ n'ụzọ nke square na akụkụ aka nri nke onye ọkpụkpọ ọ bụla na-acha ọcha.
2.2 Ná mmalite nke egwuregwu, a player nwere 16 ìhè na-acha iberibe (na "ọcha" iberibe); nke ozo nwere nkpuru ahihia iri na isii (nkpuru oji “):
Akụkụ ndị a bụ:
Eze ọcha, nke ihe ngosi na-egosipụtakarị.
Nwanyi ocha, nke akara ngosi gosipụtara.
Erslọ elu abụọ na-acha ọcha, nke akara ngosi gosipụtara.
Bishọp abụọ na-acha ọcha, nke akara ngosi gosipụtara.
Horsesnyịnya ọcha abụọ, nke akara ngosi gosipụtara.
Asatọ na ọcha, nke akara ngosi gosipụtara.
Eze ojii, nke akara ngosi gosipụtara.
Nwanyi oji, nke akara ngosi gosipụtara.
Abụọ ndị bishọp abụọ, nke akara ngosi gosipụtara.
Horsesnyịnya ojii abụọ, nke akara ngosi gosipụtara.
2.3 Ọnọdụ izizi iberibe ahụ n’elu bọọdụ ahụ bụ ndị a:
2.4 A na-akpọ ụlọ asatọ ahụ ahaziri nke ọma 'ogidi'. A na-akpọ ụlọ asatọ ahụ ahaziri n'ahịrị 'ahịrị'. A na-akpọ akara ahịrị nke otu agba ahụ, na-aga site na nsọtụ mbadamba gaa na nke dịdebere ibe ya 'diagonal'.
3. Mmegharị nke iberibe.
3.1 Anabataghị ya ibugharịa otu akụkụ na akụkụ anọ nke otu agba ahụ. Ọ bụrụ na ibugharịa otu akụkụ na square nke onye mmegide jidere, a na-ejide nke abụọ ma wepụ ya na bọọdụ ahụ dịka akụkụ nke otu ịmegharị. A na-ekwu na otu ibe na-awakpo ibe onye mmegide ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ijide ebe ahụ, dịka Isiokwu 3.2
A na-ele otu ibe ọgụ na square, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na egbochila akụkụ ahụ ịgafe na mpaghara a, n'ihi na ọ ga-ahapụ ma ọ bụ tinye eze nke ya ọgụ.
3.2 Bishọp nwere ike ịkwaga n'akụkụ ọ bụla n'akụkụ diagonal.
3.3 Bishọp nwere ike ịkwaga n'akụkụ ọ bụla n'akụkụ faịlụ ma ọ bụ n'usoro ọ dị.
3.4 Nwanyị eze ahụ nwere ike ịkwaga n'akụkụ ọ bụla n'akụkụ kọlụm, ahịrị, ma ọ bụ diagonal ọ dị na ya.
3.5 Mgbe ị na - emegharị ihe ndị a, bishọp, rook ma ọ bụ eze nwanyị enweghị ike ịwụfe ụzọ ọ bụla n'ụzọ ha.
3.6 Horsenyịnya nwere ike ịkwaga n'otu n'ime square nke kacha nso na ya. Rịba ama na square onye ahụ nwere ike ịkwaga abụghị na otu kọlụm, ahịrị, ma ọ bụ diagonal.
3.7 ka. Enwere ike ịmegharị pawn ahụ na square, ozugbo n'ihu ya, n'otu faịlụ ahụ, nke na-anaghị ejide, ma ọ bụ
3.7.1 Na mbido mbụ ya, enwere ike ịmegharị pawn ahụ dịka ekwuru na 3.7.a; ọzọ, ị nwere ike ịkwaga ụlọ abụọ n'otu kọlụm ahụ, ma ọ bụrụhaala na ha abụọ anọghị, ma ọ bụ
3.7.2 Ndị pawn ahụ nwere ike ịkwaga na square nke ibe onye mmegide nwere, nke na-eche ihu n'ihu ya, na faịlụ dị n'akụkụ, na-ejide ibe ahụ.
3.7.3 Uzo nke gha imegide uzo nke onye iro ya gafere nke mepere uzo abuo n'otu uzo site na uzo mbu ya nwere ike ijide ihe mmegide a dika odi ka o kwaghariri.
Enwere ike ijide njide a na-agagharị ozugbo ihe ahụ e kwuru na mbụ wee kpọọ ya 'en passant'.
3.7.4. Mgbe pawn ahụ ruru ọkwa kachasị dịpụrụ adịpụ na ọnọdụ mmalite ya, a ga-agbanwe ya dị ka akụkụ nke otu aga n'otu square maka eze nwanyị, rook, bishọp ma ọ bụ onye isi nke otu agba dị ka pawn ahụ. Nhọrọ nke onye ọkpụkpọ ahụ abụghị naanị iberibe ndị ejidere na egwuregwu ahụ.
A na-akpọ mgbanwe a maka ego ọzọ maka 'nkwalite' na ihe nke ibe ọhụrụ ahụ bụ ozugbo.
3.8 E nwere ụzọ abụọ dị iche iche iji kpalie eze: mee ka eze gaa n'ụlọ ọ bụla agbata obi ya nke otu ma ọ bụ karịa ibe ya anaghị ebuso ya agha.
O nwekwara ike ịbụ site na 'na-efegharị'. Nke a bụ njem emere na eze na otu rooks, nke nwere agba dị na ahịrị nke mbụ nke onye ọkpụkpọ, a na-ewere dị ka otu eze na-agagharị ma gbuo ya dị ka ndị a: a kpọfere eze site n'ụlọ mbụ ya ụlọ abụọ chee ụlọ elu nke dị n'ụlọ nke mbụ ya ihu, a ga-atụgharị ụlọ elu ahụ n'ụlọ nke eze ka gafesịrị.
(1) Ikike inye:
ọ bụrụ na a kpaliri eze ahụ, ma ọ bụ
ya na ulo elu nke eweghariworo
(2) Enweghi ohere ịhapụ castling nwa oge:
ọ bụrụ na akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ nke onye iro ahụ ga-awakpo akụkụ anọ ahụ eze ga-ebi, ma ọ bụ akụkụ anọ ọ ga-agafe, ma ọ bụ akụkụ anọ ọ ga-ebi.
ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla dị n’etiti eze na oké nkume nke a ga-eji tụfuo ya.
3.9 A na-ekwu na eze na-achịkwa ma ọ bụrụ na otu onye ma ọ bụ karịa nke ndị na-emegide ya wakporo ya, ọbụlagodi na mpempe akwụkwọ ndị ahụ rapaara, ya bụ, a na-egbochi ha ịhapụ ụlọ ahụ, n'ihi na ha ga-ahapụ ma ọ bụ tinye eze nke ha n'okpuru ọchịchị.
Onweghi imeghari n'uzo nke ekpughe ma obu tinye eze ya n'okpuru aka.
4. Omume nke imegharị iberibe.
4.1 A ghaghi iji otu aka mee mmeghari nke obula.
4.2 Ọ bụrụhaala na o gosipụtara ebumnuche ya n'ọdịnihu (dịka ọmụmaatụ, na-ekwu na m nwetara "j'adoube" ma ọ bụ "M na-edozi"), onye ọkpụkpọ nwere ohere igwu egwu nwere ike inweta otu ma ọ bụ karịa iberibe n'ụlọ ya.
4.3 Ewezuga dị ka enyere ya na edemede 4.2, ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ nke ntụgharị igwu ya metụrụ
ama ụma otu ma ọ bụ karịa nke ibe ya na bọọdụ ahụ, ọ ga-egwu egwu nke mbụ emetụrụ nke nwere ike ịmegharị, ma ọ bụ
otu ma ọ bụ karịa nke ibe ya iberibe, ọ ga-weghara nke mbụ ibe metụrụ, nke nwere ike weghaara, ma ọ bụ
Otu mpempe agba ọ bụla, ọ ga - ejide mpempe nke onye iro ya na mpempe ya ma ọ bụ, ọ bụrụ na nke a bụ iwu na - akwadoghị, bugharịa ma ọ bụ weghara mpempe nke mbụ emetụtara nke enwere ike igwu ma ọ bụ weghaara. Ọ bụrụ na o doghị anya otu egwuri egwu na mbụ, egwu nke onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị ka a gụọ ya ka egwuri egwu tupu nke onye iro ya.
4.4 Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ na-ewe oge:
kpachaara anya na-emetụ eze gị aka na rook ga-atụba nku a ma ọ bụrụ na ịkwaga iwu.
kpachaara anya na-emetụ otu rook na mgbe ahụ eze ya, anaghị ekwe ka ọ kwụ na nku a na njem a ma ọ ga-achịkwa ọnọdụ ahụ site na edemede 4.3.a
Site na ebumnuche nke nkedo, ọ na-emetụ eze ma ọ bụ eze na rook n'otu oge ahụ, mana ịkwanye n'akụkụ a bụ iwu na-akwadoghị, onye ọkpụkpọ ahụ ga-eme njem iwu ọzọ na eze ha (nke nwere ike ịgụnye ụlọ nke ọzọ). Ọ bụrụ na eze enweghị usoro iwu ọ bụla, onye ọkpụkpọ ahụ nwere onwe ya ịme njem ọ bụla ọzọ.
na-akwalite a pawn, oke nke mpempe na-agwụcha naanị mgbe ibe metụrụ nkwado square.
Ọ bụrụ na ọnweghị nke iberibe ahụ metụrụ nwere ike ịmegharị ma ọ bụ weghara, onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịmegharị iwu ọ bụla.
Mgbe otu ibe dara na ụlọ, n'ihi mkpali iwu ma ọ bụ akụkụ nke nkwagide iwu, enweghị ike ịkwaga ya n'ụlọ ọzọ na mmegharị a. A na-ahụta mmegharị ahụ ka emechara:
n'ihe banyere ijide, mgbe ewepụrụ ihe ahụ jidere na bọọdụ ahụ na onye ọkpụkpọ ahụ, mgbe ọ debere mpempe ya na square ọhụrụ ahụ, wepụtara ibe ya n'aka ya;
n'ihe banyere castling, mgbe ọkpụkpọ tọhapụrụ rook n'aka ya na square nke eze gafere na mbụ. Mgbe onye ọkpụkpọ a tọhapụrụ eze n'aka, agaghị etinye mmegharị ahụ, mana onye ọkpụkpọ ahụ enweghịzi ikike ịme ọ bụla ọzọ karịa ụlọ nke nku ahụ, ọ bụrụ na nke a bụ iwu;
n'ihe gbasara ịkwalite pawn, mgbe ewepụrụ pawn ahụ na bọọdụ na aka onye ọkpụkpọ wepụtara mpempe ọhụrụ ahụ mgbe etinyechara ya na ebe nkwalite ahụ. Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ ahapụla pawn nke ruru igbe nkwado nke aka ya, emebeghị njem ahụ, mana onye ọkpụkpọ ahụ enweghịzi ikike igwu egwu
onye na-aga ije na ulo ozo.
A na-ahụta ihe ahụ ka ihe iwu kwadoro mgbe ihe niile dị mkpa dị na Nkeji edemede 3 zutere.
4.7 Onye ọkpụkpọ ahụ tufuru ikike ime mkpesa banyere mmebi nke edemede nke 4 site na onye iro, site na mgbe ọ kpachaara anya metụ mpempe aka.
5. Ọgwụgwụ nke ọpụpụ
5.1 Egwuregwu ahụ meriri site na onye ọkpụkpọ na-achịkwa eze nke onye iro ya. Nke a mechiri egwuregwu ahụ ozugbo, ọ bụrụhaala na ịkwagharị na -emepụta ọnọdụ nyocha ahụ bụ iwu.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ meriri egwuregwu ahụ site na onye ọkpụkpọ nke onye iro ya kwupụtara na ọ hapụrụ. Nke a mechiri egwuregwu ahụ ozugbo.
5.2 A na-adọta egwuregwu ahụ mgbe onye ọkpụkpọ na-agbanye aka enweghị usoro iwu ọ bụla na eze ya anaghị achịkwa. E kwuru na asọmpi ahụ mechara ka eze “rie”. Nke a mechiri egwuregwu ahụ ozugbo ọ bụrụhaala na ịkwagharị nke wepụtara ọnọdụ ụlọ ahịa bụ ihe iwu kwadoro.
egwuregwu na-adọrọ mmasị mgbe ọnọdụ pụtara na nke ọ nweghị onye ọkpụkpọ nwere ike ịlele eze nke onye iro ahụ site na usoro usoro iwu. E kwuru na egwuregwu ahụ biri na "ọnọdụ nwụrụ anwụ." Nke a mechiri egwuregwu ahụ ozugbo ọ bụrụhaala na ngagharị nke na-eweta ọnọdụ bụ ihe iwu kwadoro (lee Nkeji edemede 9.6)
Egwuregwu ahụ na-ewere ọnọdụ site na nkwekọrịta nkwekọrịta n'etiti ndị egwuregwu n'oge asọmpi ahụ. Nke a mechiri egwuregwu ahụ ozugbo. (Lee Nkeji edemede 9.1)
Enwere ike ịdọrọ egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na otu ọnọdụ yiri ma ọ bụ pụta na mbadamba ọ dịkarịa ala ugboro atọ. (Lee Nkeji edemede 9.2)
Egwuregwu ahụ nwere ike ịbịaru ma ọ bụrụ na ndị egwuregwu ahụ emeela 50 ikpeazụ ha na-aga n'ihu na-enweghị imegharị pawns ọ bụla na-enweghị njide ọ bụla. (Lee Nkeji edemede 9.3)
6. Chess elekere
6.1. 'Chess clock' pụtara igwe elekere nwere oge abụọ, ejikọtara ya n'ụzọ naanị otu onye n'ime ha nwere ike ịrụ ọrụ n'otu oge.
'Elekere' na Iwu nke Chess pụtara otu n'ime oge nyocha abụọ. Elekere ọ bụla nwere akụ.
'Arrow drop' pụtara njedebe nke oge enyere maka onye ọkpụkpọ.
6.2. Mgbe ị na-eji chess elekere, ọkpụkpọ ọ bụla ga-emerịrị opekata mpe nke ịmegharị ma ọ bụ ihe niile na oge ọ bụla na / ma ọ bụ agbakwunye oge nwere ike ị ekenye mgbe ịmegharị ọ bụla. A ghaghị ịkọwa ihe a niile tupu oge eruo.
Oge agbakwunyere site na ihe ọkpụkpọ n'otu oge agbakwunye na oge nke oge ọzọ, belụsọ na "oge igbu oge".
Na ọnọdụ nke "igbu oge",, E nyere ndị egwuregwu abụọ ụfọdụ 'oge iche echiche'. Ọ bụla ọkpụkpọ na-enweta a "ofu mmezi oge" na onye ọ bụla aga. Oge ngụkọta oge na-amalite mgbe oge akara aka gafere. Ọ bụrụhaala na onye ọkpụkpọ na-akwụsị elekere ya tupu “oge a kara aka” agbapụ, “oge mbụ” anaghị agbanwe agbanwe, n'agbanyeghị ogo “oge a kara aka” e ji rụọ ya.
6.3 Ozugbo akụ ga-ada, a ga-enyocharịrị ihe achọrọ nke edemede 6.2.
6.4 Tupu egwuregwu ahụ amalite, ọ bụ onye nchịkwa ga-ekpebi ebe a ga-etinye elekere.
6.5 Oge elekere nke onye ọkpụkpọ nwere mpempe ọcha ga-amalite n'oge akọwapụtara maka mmalite egwuregwu ahụ.
6.6 Ọ bụla ọkpụkpọ egwuregwu rutere bọọdụ mgbe mbido nnọkọ ga-efunahụ egwuregwu ahụ. Ya mere, oge lags bụ nkeji efu. Iwu asọmpi ahụ nwere ike ịkọwa ma ọ bụghị.
Ọ bụrụ na iwu nke asọmpi gosipụtara oge dị iche iche na-anọghị, ihe ndị a metụtara:
Ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ndị egwuregwu ahụ erutere n'oge mmalite, onye ọkpụkpọ nwere iberibe ọcha ga-atụfu oge niile gafere tupu ọ bịarute, belụsọ na iwu asọmpi kwuru ma ọ bụ onye ọka ikpe kpebiri ọzọ.
6.7 N'oge egwuregwu ahụ, onye ọkpụkpọ ọ bụla, mgbe ọ gafesịrị na bọọdụ, ga-akwụsị elekere ya wee bido elekere nke onye iro ya. A ghaghị ịhapụ onye ọkpụkpọ ka ọ rụọ ọrụ ntụtụ na elekere ya. Agaghị agagharị njem gị dị ka nke zuru oke ruo mgbe ịmechara ya, belụsọ na mbugharị ahụ kwụsịrị egwuregwu ahụ (lee Isiokwu 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c na 9.6).
A na-ewere oge n'etiti ịmegharị na bọọdụ na ịkwụsị elekere n'onwe ya, yana ịmalite elekere nke onye mmegide ahụ, dị ka akụkụ nke oge enyere onye ọkpụkpọ ahụ.
Onye na-egwu egwu aghaghari elekere ya site na otu aka o ji mee njem ya. A machibidoro idebe aka gị na ntụtụ nche ma ọ bụ ịtụgharị n'elu ya.
Ndị na-egwu egwu ga-edozi chess chess nke ọma. Amachibidoro iji ya oke oke ike, jide ya ma ọ bụ dobe ya. Ekwesiri iji elekere ahuhu kwesiri ekwesi dika odi na edemede 13.4.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ enweghị ike iji elekere ahụ, ọ ga-enyerịrị onye inyeaka iji rụọ ọrụ a, yana nkwado nke onye na-ese okwu. Elere gị ga-edozi nke ọma site na onye na-eme ihe ngosi n'ụzọ ziri ezi.
A na-ewere akụ ka ọ daa mgbe onye na-egbu egwuregwu hụrụ eziokwu ma ọ bụ mgbe otu n'ime ndị egwuregwu ahụ kwuru eziokwu banyere ya.
Ewezuga mgbe otu n'ime ndokwa dị na Isiokwu 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c metụtara, onye ọkpụkpọ nke tufuru ọnụọgụ edepụtara na oge ga-efunahụ egwuregwu ahụ. Otú ọ dị, a na-adọta egwuregwu ahụ mgbe ọnọdụ ruru ebe onye iro ahụ enweghị ike ịlele eze nke onye iro ahụ site na usoro nke usoro iwu.
Na. Ngosipụta ọ bụla enyere site na nche ga-atụle nkwenye na enweghị ntụpọ ọ bụla doro anya. A ghaghị dochie elekere ọ bụla chess nwere ntụpọ doro anya. Onye nchịkwa ga-edochi elekere ma jiri ezi uche mee ka ịtọọ oge iji aka nke elekere ga-anọchi nke nwere nkwarụ.
EE. Ọ bụrụ na n’oge egwuregwu ahụ a chọpụtara na ịtọ otu ma ọ bụ abụọ elekere ahụ ezighi ezi, onye ọkpụkpọ ma ọ bụ onye na-ese okwu ga-akwụsị elekere ozugbo. Onye na-eme egwuregwu ga-agbazi oge ịgba égbè na egbe égbè. Onye nchịkwa ga-eji amamihe ya kachasị mma chọpụta ụkpụrụ ziri ezi.
6.8 Ọ bụrụ na akụ abụọ ahụ adaa na ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta nke dabara na mbụ:
egwuregwu ga-aga n'ihu ma ọ bụrụ na nke a emee n'oge egwuregwu ọ bụla, belụsọ oge ikpeazụ.
egwuregwu na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ọ na-erukwa n'oge egwuregwu oge, mgbe niile fọdụrụ Nke ga-agwụ agwụ.
6.9 Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịkwụsị egwuregwu, onye nchịkwa ga-akwụsị elekere.
Onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịkwụsị elekere iji chọọ enyemaka onye nchịkwa, dịka ọmụmaatụ, mgbe nkwalite pụtara na ibe achọrọ adịghị.
Onye nchịkwa ga-ekpebi mgbe egwu ga-amalite ọzọ.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ kwụsịrị elekere iji chọọ enyemaka site na onye na-ese okwu egwuregwu, onye nchịkwa ga-ekpebi ma ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ nwere ezigbo ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na o doro anya na enweghị ezigbo ihe kpatara ịkwụsị clocks, a ga-ata onye ọkpụkpọ ahụ ahụhụ dịka edemede 13.4
6.10 Ọ bụrụ na ezighi ezi emee na / ma ọ bụ iberibe a ga-anọchi na a gara aga ọnọdụ, ndị refirii ga-eji ya kasị mma ikpe iji chọpụta oge dị na clocks. Onye na-eme egwuregwu ga-edozi ọnụ ọgụgụ mmegharị azụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
6.11 N'ime ime ụlọ egwuregwu: a na-ekwe ka enyocha, nyocha ma ọ bụ mbadamba mgbidi, nke na-egosi ọnọdụ ọkwa ugbu a, mbugharị na ọnụọgụ nke mmegharị emere, na elekere na-egosipụtakwa ọnụ ọgụgụ mmegharị. Agbanyeghị, onye ọkpụkpọ ahụ enweghị ike ịme nkwupụta ọ bụla dabere na ozi egosipụtapụtara n'ụzọ dị otu a.
7.1 Ọ bụrụ na n'oge egwuregwu ọ na-chọpụtara na mbụ ọnọdụ nke iberibe adabaghị, egwuregwu ga-kagbuo na a ọhụrụ egwuregwu ga-akpọ.
Ọ bụrụ na, n’oge egwuregwu, ọ dị ka etinyere mbadamba ahụ n’ụzọ megidere ndokwa nke edemede 2.1, egwuregwu na-aga n’ihu, mana a ga-ebufe ọnọdụ ọ ga-abụrịrị na bọọdụ ziri ezi.
7.2 Ọ bụrụ na egwuregwu amalitela na agba ndị gbanwere, ọ ga-aga n'ihu belụsọ na onye nchịkwa ga-ekpebi nke ọzọ.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ na-akpali otu ma ọ bụ karịa iberibe, ọ ga-eweghachi ọnọdụ ziri ezi na oge nke ya. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye ọkpụkpọ ma ọ bụ onye mmegide ahụ nwere ike ịkwụsị elekere ma kpọọ onye na-ese okwu. Onye na-eme egwuregwu nwere ike ịta onye ọkpụkpọ nke mere ka ọ gafee.
7.3 Ọ bụrụ na, n'oge egwuregwu, achọpụtara na mmegharị iwu na-akwadoghị emechaala, gụnyere ọdịda na emume nke ịkwalite pawn ma ọ bụ ijide eze nke onye iro ahụ, a ghaghị ịmaliteghachi ọnọdụ ahụ tupu iwu ahụ. Ọ bụrụ na enweghị ike ịmegharị ọnọdụ ahụ, egwu ga-aga n'ihu site na ọnọdụ njirimara ikpeazụ, tupu enweghi ike. A ga-edozirịrị elekere dabere na edemede 6.13. Ederede 4.3 na 4.6 metụtara mmegharị emere kama ịgagharị na-akwadoghị iwu. Egwuregwu ga-aga n'ihu site na ọnọdụ eweghachiri.
Ọ bụrụ na mgbe ịmechara ihe ndị akọwapụtara na Nkeji edemede 7.4.a, maka mbido abụọ na-akwadoghị iwu nke onye ọkpụkpọ, onye na-ese okwu ga-enye onye iro ahụ oge abụọ ọzọ na nke ọ bụla; maka mmebi iwu nke atọ nke otu onye ọkpụkpọ ahụ, onye na-ese okwu ga-ekwupụta egwuregwu ahụ furu efu maka onye ọkpụkpọ ahụ.
Otú ọ dị, a na-adọta egwuregwu ahụ mgbe ọnọdụ ruru ebe onye iro ahụ enweghị ike ịlele eze nke onye iro ahụ site na usoro usoro iwu ga-ekwe omume.
7.4 Ọ bụrụ na, n'oge egwuregwu, a hụrụ iberibe ahụ ka ha si n'ụlọ ha kwapụ, a ghaghị weghachite ọnọdụ ahụ tupu oge adịghị anya. Ọ bụrụ na enweghị ike ikpebi ọnọdụ bu ụzọ tupu ezighi ezi, egwu ga-aga n'ihu site na njirimara nchọpụta ikpeazụ tupu enweghi iwu. A ga-edozirịrị elekere dabere na edemede 6.13. Egwuregwu ga-aga n'ihu site na ọnọdụ eweghachiri.
8. Nkọwa nke onyinye
8.1 N'oge egwuregwu ahụ, achọrọ onye ọkpụkpọ ọ bụla ka ọ dee na 'mpempe akwụkwọ' nke edepụtara maka asọmpi ahụ, na ederede algebra (Lee Ihe Odide C), mmegharị nke ya na nke onye iro ahụ, n'ụzọ ziri ezi, bugharịa usoro ahụ, n'ụzọ dokwuo anya ma nwekwuo ike nghọta. A machibidoro ide ihe ngosi ahụ tupu ịme ya na bọọdụ ahụ, belụsọ mgbe ekwuputara tie n'okpuru Nkeji edemede 9.2, 9.3, ma ọ bụ yigharịa egwuregwu dabere na edemede 1.a. nke Usoro Ntuziaka Mbugharị.
Onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịzaghachi nzaghachi nke onye mmegide tupu ede ya, ọ bụrụ na ha chọrọ.
Must ga-ederịrị onyinye gị gara aga tupu ịme ọzọ.
Ndị egwuregwu abụọ ahụ ga-enyerịrị onyinye nke eserese na mpempe akwụkwọ (Lee Ihe Odide C.13).
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ enweghị ike ịme akara, onye inyeaka, nke onye ọkpụkpọ ahụ ga-enye ya ma nabata onye na-eme egwuregwu ahụ, ga-eme ihe ahụ. Onye nlere ga-edozi elekere ya anya nke ọma.
8.2 N'oge egwuregwu ahụ, onye na-eme egwuregwu ga-ahụrịrị mpempe akwụkwọ ahụ.
8.3 Akwụkwọ mgbasa ozi bụ akụ nke ndị na-ahazi mmemme.
8.4 Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ nwere ihe na-erughị nkeji ise na elekere ya n'oge ọ bụla n'oge egwuregwu na anaghị anata oge ọzọ nke 30 sekọnd ma ọ bụ karịa mgbe ọ bụla na-agagharị, maka oge fọdụrụnụ, a chọghị ya iji mezuo ihe egwuregwu ahụ chọrọ. Nkebi nke 8.1. Ozugbo otu n'ime akụ́ ahụ dara, onye ọkpụkpọ ahụ ga-emerịrị mpempe akwụkwọ ya tupu ya agaa mpempe akwụkwọ.
8.5 Ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọkpụkpọ achọrọ ka akara, dị na edemede 8.4, onye nchịkwa ma ọ bụ onye inyeaka ga-anwa ịgba akaebe ma dekọọ mmegharị ahụ. N'okwu a, ozugbo akụ ahụ dara, onye na-ese okwu ga-akwụsị elekere. Mgbe ahụ, ndị egwuregwu abụọ ahụ ga-emelite akara akara ha, na-eji onye na-eme egwuregwu ma ọ bụ onye mmegide.
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu onye ọkpụkpọ ka achọrọ ka ịdekọ, dị ka ndokwa nke edemede 8.4 si kwuo, ozugbo akụ otu dara, ọ ga-emerịrị mpempe akwụkwọ ya kpamkpam tupu ya agaa mpempe akwụkwọ. Ọ bụrụhaala na ọ bụ oge gị ịme njem ahụ, onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike iji mpempe akwụkwọ nke onye iro ya, mana ọ ga-eweghachiri ya tupu ọ gawa.
Ọ bụrụ na mpempe akwụkwọ zuru ezu adịghị, ndị egwuregwu ga-eweghachi egwuregwu ahụ na bọọdụ ọzọ, n'okpuru nlekọta nke onye ọka ikpe ma ọ bụ onye enyemaka. Tupu mmalite nke nwughari egwuregwu, onye na-ese okwu ga-ahụ ọkwa egwuregwu dị ugbu a, oge na ọnụọgụ nke emere, ọ bụrụ na ozi a dị.
Ọ bụrụ na mpempe akwụkwọ ndị ahụ adịla nso ma gosipụta na onye ọkpụkpọ agafeela oge, a ga-atụle mbugharị ọzọ dị ka nke mbụ nke oge ọzọ, belụsọ na enwere ihe akaebe na emekwuola ihe.
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, ndị egwuregwu abụọ ahụ ga-abanyerịrị mpempe akwụkwọ ọrụ abụọ, na-egosi nsonaazụ nke egwuregwu ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ezighi ezi, nsonaazụ a na-eguzo, belụsọ na onye ọka ikpe kpebiri ọzọ.
9. Egwuregwu ekekọta
9.1 Iwu asọmpi ahụ nwere ike ịkọwa na ndị egwuregwu enweghị ike ikwenye ka ha kee obere ihe ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla, na-enweghị nkwenye nke onye ọka ikpe.
9.2 Ọ bụrụ na iwu nke asọmpi na-enye ohere ịbịaru site na nkwekọrịta nkwekọrịta, ihe ndị a metụtara:
Onye ọkpụkpọ chọrọ ịtụ aro ga-eme nke a mgbe emechara ọrụ ahụ na mbadamba, tupu ịkwụsị elekere ma bido elekere nke onye mmegide ahụ. Onyinye n'oge ọ bụla ọzọ n'oge egwuregwu ahụ ka dị irè, mana a ga-ahụrịrị edemede nke 12.6. Ọnọdụ enweghị ike ịgụnye na ntinye a. N'okwu abụọ a, enweghị ike iwepụ onyinye ahụ wee na-adị ire ruo mgbe onye mmegide nabatara ya, jụ ya ọnụ, jụ ya site n'imetụ ibe aka n'ebumnuche nke ịkwaga ma ọ bụ ijide ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na egwuregwu ahụ kwụsịrị n'ụzọ ọzọ.
Ndị na-egwu egwuregwu ga-enwerịrị ihe ngosi a na akara ngosi ha (Lee Ihe Odide C13).
A ga-aza eserese sitere na Isiokwu 9.2, 9.3 ma ọ bụ 10.2 dị ka onyinye onyinye.
9.2 A na-adọta egwuregwu ahụ, mgbe mkpesa ziri ezi sitere na onye ọkpụkpọ nwere ikike igwu egwu, mgbe ọ nọ n'otu ọnọdụ ahụ, ọ dịkarịa ala ugboro atọ (ọ bụchaghị site ugboro ugboro nke mmegharị)
ga-apụta, ọ bụrụ na ị buru ụzọ dee mbugharị gị na mpempe akwụkwọ ma kwupụta maka onye ntụgharị okwu ebumnuche gị ịme njem ahụ, ma ọ bụ
pụtara ugbu a na onye ọkpụkpọ na-ekwu na eriri nwere ohere igwu egwu.
A na-ewere ọnọdụ dị ka (a) na (b) dị ka otu, ọ bụrụ na otu ọkpụkpọ ahụ enwee ntụgharị, iberibe otu ụdị na agba ahụ nwere otu akụkụ ahụ, yana ohere nke mmegharị nke mpempe egwuregwu abụọ ahụ otu ihe.
Ọnọdụ ndị ahụ abụghị otu ma ọ bụrụ na enweghị ike ijide pawn nwere ike ijide 'en passant' n'ụzọ dị otu a. Mgbe a manyere eze (ma ọ bụ rook) ịkwaga, ọ na-efunahụ ikike ya, ọ bụrụ na ọ dị, naanị mgbe a kpesịrị ya.
9.3. Ejikọtara egwuregwu ahụ, n'ihi mkpesa ziri ezi nke onye ọkpụkpọ nwere ikike igwu egwu, ma ọ bụrụ:
ọ dekọtara njem ya na mpempe akwụkwọ ọrụ ya wee kwupụta na onye ọka ikpe ahụ ebumnuche ya ime ihe ọ kwagara, nke ga - eme ka ihe 50 meere onye ọkpụkpọ ọ bụla na - enweghị mmegharị nke ihe ọ bụla na enweghị njide ọ bụla, ma ọ bụ
Oge 50 gara aga agagharị mere ka ndị egwuregwu abụọ mee ya, na-enweghị ije ma ọ bụ nwude ọ bụla.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ metụrụ otu aka na Nkeji edemede 4.3 na-enweghị azọrọ taye, ọ tụfuru ikike ikwu, dị ka edemede 9.2 na 9.3, na njem ahụ.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ na-ekwu na eriri, dị ka isiokwu 9.2 na 9.3 si kwuo, ọ nwere ike ịkwụsị elekere abụọ ahụ. (Lee Nkeji edemede 6.12.b) cannot nweghị ike iwepu nkwupụta ahụ
Ọ bụrụ na azịza ahụ kpebisiri ike na ọ ga-abụ eziokwu, a na-adọta egwuregwu ahụ ozugbo
Ọ bụrụ na azịza ahụ kpebisiri ike na-ezighi ezi, onye na-ese okwu ga-agbakwunye nkeji atọ na oge fọdụrụnụ nke onye iro ahụ. Mgbe ahụ egwuregwu ahụ kwesịrị ịga n'ihu. Ọ bụrụ na a na-azọrọ na ndabere nke atụmatụ akwadoro, a ga-enye onyinye a dị ka usoro nke Nkeji edemede 4.
9.4 A na-adọta egwuregwu ahụ mgbe ọnọdụ ruru ebe onye na-agba akwụkwọ enweghị ike ime n'ihi usoro usoro iwu ọ bụla. Nke a mechiri egwuregwu ahụ ozugbo ọ bụrụhaala na ngagharị nke na-eweta ọnọdụ a bụ iwu.
10. Eme ngwangwa
10.1 The 'accelerated end' bụ oge nke egwuregwu nke ihe niile (fọdụrụ) ga-emerịrị n'ime oge ụfọdụ.
10.2 Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ, ya na ntụgharị nke ọ ga-egwu, nwere ihe na-erughị nkeji abụọ na elekere ya, ọ nwere ike ịrịọ ihe osise tupu akụ ya ada. Ọ ghaghị ịkpọ onye na-ese okwu egwuregwu ma nwee ike ịkwụsị elekere (Lee edemede 6.12.b).
Ọ bụrụ na onye ọka ikpe ahụ kwenyere na onye na-emegide ya anaghị agba mbọ iji merie egwuregwu ahụ, n'ụzọ nkịtị, ma ọ bụ na onye mmegide ahụ enweghị ike imeri n'ụzọ nkịtị, mgbe ahụ ọ ga-ekwupụta agị. Ma ọ bụghị ya, ị ga-eyigharị mkpebi gị ma ọ bụ jụ mkpesa ahụ. Ọ bụrụ na onye na-ese egwuregwu na-eyigharị mkpebi ya, a ga-ahapụ onye iro ahụ ka ọ gaa nkeji abụọ ma gbakwunye ya ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume n'ihu onye na-eme egwuregwu ahụ. Onye nchịkwa ga-ekwupụta nsonaazụ ikpeazụ na egwuregwu ahụ ma ọ bụ ozugbo enwere ike mgbe akụ ahụ rutere. Must ga-ekwupụta agbụ ma ọ bụrụ na ị kwenye na enweghị ike imeri ọnọdụ ikpeazụ site n'ụzọ nkịtị, ma ọ bụ na onye mmegide ahụ anaghị eme mgbalị iji merie egwuregwu ahụ n'ụzọ nkịtị.
Ọ bụrụ na onye na-ese okwu na-ajụ nkwupụta ahụ, onye iro ahụ ga-enwerịrị oge abụọ nke oge.
Mkpebi onye ọka ikpe ga - abụ nke ikpeazụ (na - enweghị mkpesa) maka (a), (b), (c).
11. Ọ gwụla ma ọ bụrụ na ekwuputara na mbụ, ma ọ bụghị, onye ọkpụkpọ meriri egwuregwu ha, ma ọ bụ merie site na WO, na-anata isi (1), onye ọkpụkpọ nke tụfuru egwuregwu ha ma ọ bụ tụfuo site na WO na-anata (0) pt na onye ọkpụkpọ kee egwuregwu gị na-enweta akara nke ọkara (½).
12. Omume Player.
12. 1 Ndị na-egwu egwu agaghị enwe ike ịme ihe ọ bụla na-akpata aha ọjọọ na egwuregwu nke chess.
2 Ndị na-egwu egwu nwere ike ịhapụ “ebe egwuregwu” na-enweghị ikike nke refirii. Egwuregwu ahụ nwere ime ụlọ egwuregwu, ime ụlọ mposi, mpaghara nri ọkụ, ebe echekwara ndị na-ese anwụrụ ọkụ na ebe ndị ọzọ onye ọka ikpe kwuru. Onye ọkpụkpọ ahụ, onye nwere ikike igwu egwu, enweghị ike ịhapụ ụlọ ịgba egwu na-enweghị ikike nke onye ọka ikpe.
12.2 N’egwuregwu ahụ, a machibidoro ndị egwuregwu ime ihe ndetu, ihe ọmụma ma ọ bụ ndụmọdụ, ma ọ bụ nyocha na bọọdụ ọzọ.
Na-enweghị ikike nke onye na-ese okwu egwuregwu, a machibidoro onye ọkpụkpọ ahụ ibu ekwentị ma ọ bụ usoro nkwukọrịta eletriki ndị ọzọ n'ime ụlọ egwuregwu ahụ, belụsọ na ọ kwụsịrị kpamkpam. Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ngwaọrụ ndị a na-eweta mkpọtụ, onye ọkpụkpọ ahụ ga-efunahụ egwuregwu ahụ. Onye mmegide ga-emeri. Agbanyeghị, ọ bụrụ na onye mmegide ahụ enweghị ike imeri egwuregwu ahụ site na usoro nke usoro iwu, aga-ewere akara ya dị ka eriri.
A na-ahapụ ịokingụ sịga na mpaghara onye ọka ikpe kpebiri.
Ekwesiri iji ederede ka edere ọnụ, oge elekere, ikele nke eriri, ndekọ metụtara mkpesa na data ndị ọzọ dị mkpa.
Egwuregwu ndị gwụchara egwuregwu ha kwesịrị ịbụ ndị nkiri.
A machibidoro ịdọpụ uche ma ọ bụ kpaghasị onye iro ahụ n'ụzọ ọ bụla. Nke a gụnyere mkpesa ezi uche na-adịghị na ya, onyinye na-enweghị atụ nke onyinye, ma ọ bụ igosipụta mkpọtụ na mpaghara egwuregwu.
Imebi ihe ọ bụla nke edemede 12.1 ruo 12.6 ga - eme ka itinye akwụkwọ nke mmachi enyere na edemede 13.4.
12.3 Ọjụjụ onye ọkpụkpọ na-ajụ mgbe niile ịgbaso iwu nke Chess kwesịrị ịta ahụhụ site na ida egwuregwu ahụ. Onye nchịkwa ga-ekpebi akara onye iro.
Ọ bụrụ na a mara ndị egwuregwu abụọ ikpe n'okpuru edemede 12.8, a ga-ekwupụta egwuregwu ahụ furu efu maka ha abụọ.
N'ihe banyere nkà. 10.2.d. ma ọ bụ Ihe Odide D, onye ọkpụkpọ enweghị ike ịrịọ arịrịọ maka mkpebi onye ọka ikpe.
N'ọnọdụ ọ bụla ọzọ, onye ọkpụkpọ nwere ike ịrịọ arịrịọ megide mkpebi ọ bụla nke onye na-ese okwu, belụsọ na iwu nke asọmpi ahụ kwuru ihe ọzọ.
13. Ọrụ nke onye ọka ikpe
13.1 Onye nchịkwa ga-enyocha na Iwu nke Chess na-agbasosi ike.
Onye nchịkwa ga-eme ihe maka ọdịmma kasị mma nke asọmpi ahụ. Ikwesiri igba mbọ hụ na enwere ebe egwuregwu dị mma, ka ndị egwuregwu ahụ ghara ichegbu onwe ha. Ikwesiri ileba anya na ịgba ọsọ nke asọmpi ahụ.
Onye na-ese okwu ga-elerịrị egwuregwu ahụ anya, ọkachasị mgbe ndị egwuregwu ahụ bịara n'oge, kwado mkpebi ndị o mere, ma tụọ ndị egwuregwu ahụ ntaramahụhụ mgbe o kwesịrị ekwesị.
13.2 Onye nchịkwa nwere ike itinye otu ma ọ bụ karịa n'ime ntaramahụhụ ndị a:
ịdọ aka na ntị,
dịkwuo onye iro oge fọdụrụnụ,
belata oge fọdụrụ nke onye ọkpụkpọ mmejọ,
kwupụta egwuregwu ahụ furu efu,
belata isi ihe ndị egwuregwu nwetara site na onye ọkpụkpọ mejọrọ,
mee ka isi ihe ndị na-emegide egwuregwu ahụ bulie ihe kachasị na egwuregwu ahụ,
ịchụpụ site na ihe omume ahụ
Onye na-eme egwuregwu nwere ike inye otu ma ọ bụ abụọ egwuregwu oge ọzọ na ọgba aghara mpụga n'oge egwuregwu.
Onye nchịkwa ga-etinye aka na egwuregwu, belụsọ n'okwu ndị enyere na Iwu nke
Chess. Ọ gaghị egosi ọnụọgụ nke mmegharị emere, belụsọ mgbe itinye ndokwa nke Nkeji edemede 8.5, mgbe opekata mpe otu akụ akụ daa. Onye na-eme egwuregwu ga-ezere ịgwa onye ọkpụkpọ egwuregwu na onye iro ya mere njem ma ọ bụ na onye ọkpụkpọ ahụ amalitebeghị elekere ya.
Na. Ndị na-ekiri egwuregwu na egwuregwu ndị ọzọ agaghị ekwu ma ọ bụ gbochie asọmpi n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye na-eme egwuregwu nwere ike ịchụpụ ndị omempụ na gburugburu egwuregwu. Ọ bụrụ na mmadụ ahụ ihe na-adịghị mma, ha nwere ike ịgwa onye ọka ikpe ahụ.
EE. Ọ gwụla ma onye ọka iwu nyere ikike, amachibidoro onye ọ bụla iji ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ nkwukọrịta ọ bụla na ebe mgbakọ ahụ na mpaghara ọ bụla ọzọ na-agbagha nke onye ọka ikpe kpebiri.
14.1 Ndị otu njikọta nwere ike ịrịọ FIDE iji nye mkpebi gọọmentị n'okwu metụtara Iwu Chess.
A. Cheesi ngwa ngwa
A1 Egwuregwu 'Quick Chess' bụ nke a ga-arụrịrị mmegharị niile n'ime oge akara aka nke opekata mpe nkeji iri na ise, mana ihe na-erughị nkeji 15 maka ọkpụkpọ ọ bụla; ma ọ bụ isi oge + oge 60 ọ bụla increment bụ dịkarịa ala 60 nkeji, ma ihe na-erughị 15 nkeji maka ọ bụla ọkpụkpọ.
A2 Achọghị ka ndị na-egwu egwu dekọọ mmegharị egwuregwu.
A3 Mgbe enwere nlekọta zuru oke nke egwuregwu ahụ (dịka ọmụmaatụ, otu refirii maka ihe kachasị nke atọ) Iwu asọmpi na-emetụta.
A4 Mgbe nlekọta adịghị mma, Iwu Iwu Asọmpi na-emetụta, belụsọ mgbe iwu ndị na-esonụ nke ngwa ngwa Chess na-achịkwa:
Ozugbo ọkpụkpọ ọ bụla mere njem atọ, enweghị mkpesa ọ bụla gbasara itinye mpempe akwụkwọ ndị ahụ na-ezighi ezi, nhazi bọọdụ ahụ, ma ọ bụ ntọala elekere. N'ihe banyere mgbanwe nke ọnọdụ n'etiti eze na eze nwanyị, anaghị ekwe ka ya na eze a tụda.
Onye nchịkwa ga-etinye aka na ndokwa nke Art 4 (Iwu nke ịmegharị iberibe), naanị ma ọ bụrụ na otu ma ọ bụ abụọ egwuregwu chọrọ.
Emechara ihe na-akwadoghị iwu ozugbo elekere nke onye iro ahụ malitere. Onye mmegide ahụ nwere ikike ịsị na onye ọkpụkpọ ahụ mechara ihe megidere iwu, ma ọ bụrụhaala na ya emeghị njem ya. Naanị mgbe ụdị mkpesa ahụ ga-eme ka onye nyocha ahụ tinye aka. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ndị eze abụọ ahụ na-achịkwa ma ọ bụ na-akwadobeghị nkwado nke pawn, onye na-ese okwu kwesịrị itinye aka, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
1. A na-ewere akụ ka ọ daa mgbe otu n'ime ndị egwuregwu na-ekwu okwu ziri ezi. Onye na-eme egwuregwu ga-ezere igosi aka akụ, ma ọ nwere ike itinye aka ma ọ bụrụ na akụ abụọ ahụ daa.
A5 Iji na-ekwu a oge mmeri, ndị na-azọrọ ga-akwụsị ma elekere ma gwa ndị refirii.
Maka ihe ị na-azọrọ na-aga nke ọma, mgbe elekere ahụ kwụsịrị, akụ nke onye na-azọrọ ihe ga-adị ‘elu’ ma akụ onye iro ya gbadata mgbe elekere ahụ kwụsịrị.
A6 Ọ bụrụ na ahapụla akụ abụọ ahụ ka akọwara na (1) na (2), onye nchịkwa ga-ekwupụta egwuregwu ahụ tie.
B1 Egwuregwu 'ọkụ' bụ nke a ga-arụrịrị mmegharị niile n'ime oge a kara aka nke erughị 15 nkeji maka ọkpụkpọ ọ bụla; ma ọ bụ isi oge + oge 60 ọ bụla increment bụ ihe na-erughị 15 nkeji.
B2 Mgbe enwere egwuregwu zuru oke (otu refirii maka egwuregwu ọ bụla), Iwu Asọmpi na ndokwa nke Nkeji edemede A2.
B3 Mgbe nlekọta adịghị mma, ihe ndị a kwesịrị itinye.
Egwuregwu ga-achịkwa Iwu nke Rapid Chess dị ka enyere na Ihe Odide A, belụsọ mgbe Iwu nke Lightning ndị a na-achịkwa.
Ederede 10.2 na A4c anaghị emetụta.
Emechara ihe na-akwadoghị iwu ozugbo elekere nke onye iro ahụ malitere. Tupu ime ngagharị nke aka ya, onye mmegide ahụ nwere ikike ikwu mmeri. Agbanyeghị, onye ọkpụkpọ ahụ nwere ikike ịrịrọ eserese tupu ọ mee njem nke aka ya, ọ bụrụ na onye mmegide ahụ enweghị ike ijikwa ya n'ihi usoro nke ịmegharị iwu. Mgbe onye iro ahụ mechara njem ya, enweghị ike idozi ihe megidere iwu ọ gwụla ma enwere nkwekọrịta ọ bụla na-enweghị ntinye aka nke onye na-ese okwu.
Nkọwa nke usoro algebra
C1 Na nkọwa a, "mpempe" pụtara mpempe ọ bụla, belụsọ pawn.
C2 E gosipụtara mkpụrụ akwụkwọ nke ọ bụla na mkpụrụedemede mbụ nke aha ya. Ihe Nlereanya: R = eze, D = eze nwanyị, T = rook, B = bishọp, C = onye isi. (N'ihe banyere ịnyịnya, ka mma, jiri N.)
C3 Maka akwụkwọ ozi mbụ nke aha iberibe, onye ọkpụkpọ nwere onwe ya iji leta mbụ nke aha ahụ dịka ọ na-ejikarị na mba ya. Ihe Nlereanya: F = fou (French maka bishọp), L = loper (Dutch maka bishọp). Na magazin ndị e biri ebi, a na-atụ aro iji ejiji.
Wngwọ ụmụaka C4 Egosighi ha na akwukwo ozi mbu ha, ma ha adighi ama. Ihe Nlereanya: e5, d4, a5.
C5 A na-egosi kọlụm asatọ (site n'aka ekpe gaa n'aka nri maka ọcha na n'aka nri gaa n'aka ekpe maka oji) site na mkpụrụedemede pere mpe, a, b, c, d, e, f, g, na h, n'otu n'otu.
C6 Ahịrị asatọ (site na ala ruo n'elu maka ọkpụkpọ ọcha na site n'elu ruo ala maka ọkpụkpọ ojii) dị na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8, n'otu n'otu. N'ihi ya, na ọnọdụ mmalite, a na-etinye iberibe ọcha na ahịrị mbụ na nke abụọ; A na-etinye iberibe ojii na ahịrị asatọ na nke asaa.
C7 N'ihi usoro iwu ndị a dị n'elu, igbe nke 64 ọ bụla na-egosipụtakarị site na otu nchikota leta na nọmba
C8 Mbughari obula nke ibe bu ihe gosiputara site na) akwukwo mbu nke aha mpempe akwukwo a ma b) ebe mbata. Onweghi ihe ojoo n’agbata a) na b).
Ihe Nlereanya: Be5, Nf3, Rd1.
N’ihe banyere ndị ji ụkwụ aga, ọ bụ sọsọ ebe a rutere ka a na-egosi. Ọmụmaatụ: e5, d4, a5.
C9 Mgbe e jidere ibe, a na-etinye x n'etiti (a) akwụkwọ ozi mbụ na aha mpempe akwụkwọ na b) ebe mbata. Ihe Nlereanya: Bxe5, Nxf3, Rxd1. Mgbe pawn ahụ jidere mmadụ, a ga-egosiputa kọlụm mmalite, wee bụrụ x, n'ikpeazụ, square nke mbata. Ihe Nlereanya: dxe5, gxf3, axb5. N'ihe banyere ijide 'en passant', a na-enye square square, na-egosi ebe pawn ahụ mechara daa na leta 'ep' agbakwunyere na ederede. Ihe Nlereanya: exd6 ep
C10 Ọ bụrụ na taịlị abụọ yiri onwe ha nwere ike ịga n’otu akụkụ ahụ, a na-egosi taịlị na-agagharị dị ka ndị a:
Ọ bụrụ na mpempe abụọ ahụ dị n’usoro: site na a) akwụkwọ ozi mbụ nke aha ibe, b) kọlụm nke ebe ọpụpụ, na c) ebe mbata.
Ọ bụrụ na mpempe abụọ ahụ dị n'otu kọlụm: site na a) akwụkwọ ozi mbụ nke aha mpempe ahụ, b) ahịrị nke ebe ọpụpụ, na c) ebe mbata
Ọ bụrụ na iberibe ahụ dị na ogidi na ahịrị dị iche iche, usoro 1) ka mma. N'ihe banyere ijide, 'x' enwere ike ịgbakwunye n'etiti b) na c).
Enwere uzo abuo, na uzo g1 na e1, ma otu n’ime ha na-aga square f3: Ngf3 ma obu Nef3, dika o nwere ike.
E nwere ndị knight abụọ, na g5 na g1 n'ámá, otu n'ime ha na-agagharị na f3 square: C5f3 ma ọ bụ C1f3, dịka ikpe nwere ike ịbụ.
Enwere ndị knight abụọ, n'ụlọ h2 na d4, ma otu onye n'ime ha na-aga n'ụlọ f3: Nf3 ma ọ bụ Ndf3, ka ikpe si dị.
Ọ bụrụ na ị nwude n'ime etiti f3, a na-agbanwe ihe atụ ndị dị n'elu site na itinye 'x':
1) Ọ bụrụ na ụzọ abụọ nwere ike ijide otu ibe dị ka onye na-emegide ya, a ga-egosi pawn ahụ megharịrị site na a) leta nke kọlụm mbụ, b) ihe 'x', c) akụkụ ikpeazụ. Ihe Nlereanya: oburu na enwere uzo ocha na uzo c4 na e4 na oji na d5, ihe edere maka White na-aga cxd5 ma obu exd5, dika o kwesiri.
N'ihe banyere nkwalite pawn, egosiri ihe eji eme pawn, na-esote ozigbo leta mbụ nke mpempe akwụkwọ ọhụrụ. Ọmụmaatụ: d8D, f8C, b1B, g1T.
A ga-enyerịrị onyinye ịke dị ka (=)
Mkpirisi dị mkpa:
0-0 = ebu na ulo elu h1 ma obu ulo elu h8 (obere okwute)
0-0-0 = ebu na ulo elu a1 ma obu ulo elu a8
(nnukwu okwute) x = nwudo
+ = lelee ++ ma ọ bụ # = onye obula
ep = nwudo "ngafe"
Ọ bụghị iwu na ị ga-ede ego, nyochaa ego na njide na mpempe akwụkwọ.
Emechara ngwa ngwa na-enweghị onye nchịkwa na ebe egwuregwu ahụ
N’ebe a na-achịkwa egwuregwu site na ndokwa nke Nkeji edemede 10, onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ikwu na ọ dọtara mgbe ọ nwere ihe na-erughị nkeji abụọ na elekere ya na tupu akụ ya ada. Nke a mechiri egwuregwu ahụ. Nwere ike ikwu dabere na:
na onye iro gị enweghị ike imeri n’ụzọ nkịtị, yana / ma ọ bụ
na onye iro gị anaghị eme mgbalị iji merie n'ụzọ nkịtị.
Na nkwupụta (a), onye ọkpụkpọ ahụ ga-edekọ ọkwa ikpeazụ na onye iro ya na-enyocha ya.
Na nkwupụta (b), onye ọkpụkpọ ahụ ga-edekọ ọkwa ikpeazụ na mpempe akwụkwọ emelitere.
Onye na-emegide ya ga-enyocharịrị ọkwa nke ikpeazụ yana akwụkwọ ọrụ.
A ga-eziga akwụkwọ mkpesa ahụ na onye ọka ikpe, onye mkpebi ya ga-abụ nke ikpeazụ.
Iwu nke egwuregwu ahụ na ndị kpuru ìsì na ndị na-ahụ ụzọ nke ọma.
Ndị nduzi asọmpi E1 kwesịrị ịnwe ike ịmegharị iwu ndị edepụtara n'okpuru dị ka ọnọdụ mpaghara.
N’egwuregwu chess dị n’etiti ndị egwuregwu na-ahụ ụzọ na ndị egwuregwu na-ahụ ụzọ (ndị kpuru ìsì n’ihu ọha), onye ọkpụkpọ ọ bụla nwere ike ịchọ ka e jiri mbadamba abụọ, ndị na-ekiri ihe egwuregwu nwere bọọdụ nkịtị, yana onye ọkpụkpọ ahụ nwere anya nke nwere ogwe osisi arụgoro anya. Decklọ a rụrụ arụ ga-emerịrị ihe ndị a:
opekata mpe 20 x 20 cm;
ọwaa ndu ọ-lụfuta lwa;
obere oghere dị n’ụlọ ọ bụla;
Mpempe akwụkwọ ọ bụla ga-enwerịrị obere ntụtụ dabara nke ọma na oghere nke ụlọ;
Mpekere "Staunton", iberibe oji na-egosipụta akara pụrụ iche.
E2 Iwu ndị a kwesịrị ịchịkwa egwuregwu ahụ:
1. Onyinye ga-ekwupụta n’ụzọ doro anya, onye mmegide meghachiri ya ma gbuo ya na bọọdụ ya. Mgbe ị na-akwalite pawn, onye ọkpụkpọ ahụ ga-ekwupụta nke ibe ahọrọ. Iji mee ka ọkwa dị ka o kwere mee, a na-atụ aro ka ị jiri ya
Aha ndị a karịa mkpụrụedemede algebraic kwekọrọ
Ahịrị ndị sitere na ọcha ruo nwa nwere ọnụ ọgụgụ dị na German:
8 acht (asatọ)
A mara ọkwa ọkwa ọgbụgba "Lange Rochade”(Grande Roque n’asụsụ German) na“ Kurze Rochade ”(Obere obere ụlọ n’asụsụ German).
Iberibe ahụ jiri aha asụsụ German:
"Koenig ”(Eze),“ Dame ”(Queen),“ Turm ”(Rook),“ Laeufer ”(Bishop),“ Springer ”(enyịnya) na“ Bauer ”(Pawn).
Na bọọdụ onye ọkpụkpọ na-ahụghị nke ọma, a na-ahụta ibe ya metụrụ aka mgbe ewepụrụ ya na oghere ndozi.
A na-ahụta onyinye a ga-egbu mgbe:
n'ihe banyere ijide, ọ bụrụ na ewepụrụ akụkụ ahụ weghaara na bọọdụ nke onye ọkpụkpọ nke ntụgharị ya bụ igwu egwu;
etinyela akụkụ n'ime oghere ndozi dị iche;
A mara ọkwa na enye.
Naanị mgbe ahụ ka a ga-amalite elekere nke onye iro ahụ.
Ozugbo e webatara isi nke 2 na nke 3 dị n'elu, iwu ndị dị adị dị adị maka onye na-agba afa.
4. A na-ahapụ iji ihe nche pụrụ iche emere maka ọkpụkpọ na-adịghị ahụ ụzọ. Oge nche kwesiri inwe njirimara ndi a:
ihe ngosi a gbanyere na aka ike, na nkeji ise ọ bụla nwere akara na minit 15 ọ bụla nwere ntụpọ abụọ;
Otu akụ nke nwere ike imetụ aka. A ghaghị ilebara anya nke ọma ka akụ ndị ahụ gbanwee nke ọma ka onye ọkpụkpọ wee nwee ike ịnụ aka nke nkeji ise gara aga nke awa zuru ezu.
Onye ọkpụkpọ anya na-adịghị emerụ ahụ kwesịrị idekọ egwuregwu ahụ na Braille, ma ọ bụ jiri aka dee mmegharị ahụ, ma ọ bụ dekọọ ha na teepu magnetik.
Ekwesịrị idozi njehie ọ bụla na ọkwa nke ịkwaga ozugbo tupu elekere nke onye mmegide amalite.
Ọ bụrụ na n'oge egwuregwu ahụ ọnọdụ dị iche iche pụtara na mbadamba abụọ ahụ, a ghaghị idozi ha site n'enyemaka nke onye na-ese okwu ma kpọọ akwụkwọ ọrụ nke ndị egwuregwu abụọ ahụ. Ọ bụrụ na akwụkwọ ọrụ abụọ ahụ dakọtara, onye ọkpụkpọ ahụ nke dere ederede ahụ n'ụzọ ziri ezi, ma gbuo ya na-ezighi ezi, ga-edozi ọnọdụ ha iji kwekọọ na nkwupụta ahụ egosiri na mpempe akwụkwọ.
Ọ bụrụ na ọdịiche dị na akwụkwọ ọrụ abụọ ahụ, a ga-enyerịrị ọnọdụ ahụ ruo ebe akwụkwọ ọrụ abụọ ahụ dabara na onye na-ese okwu ga-eweghachi elekere elekere ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Onye ọkpụkpọ anya a na-ahụ anya ga-enwe ikike iji onye enyemaka ga-arụ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ iwu niile ndị a:
Mee ka ọkpụkpọ ọkpụkpọ ọ bụla na mbadamba ndị mmegide;
Kwupụta mmegharị nke egwuregwu abụọ ahụ;
Dekọọ mmegharị ahụ na mpempe akwụkwọ ọrụ ọkpụkpọ anya na-adịghị mma ma malite elekere nke onye iro (iburu n'uche iwu 3.c);
gwa onye ọkpụkpọ ahụ nwere nsogbu anya, naanị mgbe ọ rịọrọ, ọnụ ọgụgụ mmegharị emere na oge ndị egwuregwu abụọ ahụ ji;
na-azọrọ mmeri ma ọ bụrụ na onye mmegide ahụ elekere adawo ma gwa onye na-eme egwuregwu mgbe onye ọkpụkpọ egwu ahụ metụrụ otu akụkụ ya aka.
Mee usoro ndị dị mkpa ma ọ bụrụ na ị kwụsịtụrụ.
10. Ọ bụrụ na ọkpụkpọ ahụ anaghị ahụ ụzọ nke ọma anaghị eji onye inyeaka, onye ọkpụkpọ ọhụụ nwere ike ịrịọ mmadụ ka ọ were ọrụ maka imezu ọrụ ndị ekwuru na isi 9.a na 9.b.
Chess na-achịkwa 960
F1 Tupu egwuregwu nke Chess960, a na-etinye ọnọdụ mmalite enweghị usoro, n'okpuru iwu ụfọdụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-egwu egwuregwu ahụ n'otu ụzọ ahụ dị ka chess oge gboo. Karịsịa, iberibe na pawns nwere ihe ha na-eme, ihe mgbaru ọsọ nke onye ọkpụkpọ ọ bụla bụ ịlele eze nke onye iro ahụ.
Chọrọ maka ịmalite ọnọdụ
Ọnọdụ mmalite maka Chess960 ga-agbaso iwu ụfọdụ. A ghaghị itinye pawns ndị na-acha ọcha n'ahịrị nke abụọ dị ka ọ dị na chess nkịtị. A na-etinye eriri ọcha ndị fọdụrụnụ n'ahịrị nke mbụ, mana yana mgbochi ndị a:
E debere eze ahụ n’etiti etiti ụlọ elu abụọ ahụ,
A na-etinye ndị bishọp n'ụlọ ndị nwere agba dị iche, na
A na-etinye mpempe ojii kpọmkwem na-acha ọcha iberibe.
Enwere ike ịmalite ọnọdụ izizi tupu ịpụ, ma ọ bụ site na mmemme kọmputa ma ọ bụ site na iji data, ego ma ọ bụ kaadị, wdg.
Chess960 castling iwu
Chess960 na-enye onye ọkpụkpọ ọ bụla ohere ịtụba otu egwuregwu kwa otu, na eze jikọrọ ọnụ na rook na-agagharị n'otu njem. Otú ọ dị, ụfọdụ nkọwa nke egwuregwu kpochapụwo nke chess dị mkpa maka ịtụba, n'ihi na iwu ọdịnala na-eche na ịmalite ọnọdụ maka eze na rook nke anaghị adịkarị na 960 chess.
Etu esi amalite
Na Chess960, dabere n'ọnọdụ eze na rook tupu ọgbụgba, a na-eme ọgbụgba site na iji otu ụzọ anọ:
Ugboro abụọ na-agagharị: iso eze na-esote ya na rook.
Linggba ọsọ site na ntụgharị: ịgbanwere ọnọdụ nke eze na nke rook.
Castling na otu eze na-aga: Mee naanị otu eze ịkwaga.
Kpoo otu ulo elu na-aga: Mee nani otu ulo elu.
Mgbe a tụbara ya na mbadamba anụ ahụ ya na mmadụ na-emegide ya, a na-atụ aro ka eze pụọ n'elu mbadamba ahụ n'akụkụ ọnọdụ ikpeazụ ya, rook ga-esi n'ọnọdụ mbụ ya gaa n'ọnọdụ ikpeazụ ya, n'ikpeazụ, a ga-etinye eze ahụ. Ebe ị na-aga.
Mgbe emechara ya, ọnọdụ ikpeazụ nke rook na eze ga-abụ otu ihe ahụ na chess oge gboo.
Ya mere, mgbe nnukwu ụlọ ahụ (nke a maara dị ka 0-0-0 ma mara dị ka eze-n'akụkụ castling na orthodox chess, eze nọ n'ụlọ c (c1 maka ọcha na c8 maka ojii) na rook bụ n'ime ụlọ d (d1 maka ọcha na d8 maka oji) Mgbe a tụbara ya na square g
(nke a maara dị ka 0-0 ma mara dị ka eze-n'akụkụ castling na orthodox chess), eze nọ na g square (g1 maka ọcha na g8 maka ojii) na rook ga-adị na f square (f1 maka ọcha na f8) ka oji).
1. Iji zere mmejọ ọ bụla, ọ dị mma ịsị "M ga-ebupute" tupu ịnye onyinye ahụ.
2. N'ebe ụfọdụ ịmalite, eze ma ọ bụ rook (mana ọ bụghị ha abụọ) anaghị agagharị n'oge ọgbụgba.
3, na ụfọdụ amalite ọnọdụ, castling nwere ike mere nká dị ka a mbụ nkwaghari.
Ogige niile dị n’agbata ebe mmalite na njedebe nke eze (gụnyere square ikpeazụ), na mpaghara niile n’agbata oghere na-amalite na njedebe nke rook (gụnyere akụkụ agwụ), ga-abụrịrị ohere, ma e wezụga eze na oghere ndị ọzọ. .
N'ebe ụfọdụ ịmalite ọnọdụ, ụfọdụ n'ámá, nke kwesịrị ịbụ nke na-adịghịzi na chess ọdịnala, nwere ike ịnọ n'oge oge ịgba. Dịka ọmụmaatụ, mgbe nnukwu ụlọ gasịrị, ọ ga-ekwe omume, ụlọ a, boe ka na-arụ ọrụ, na mgbe obere obere ụlọ ga-ekwe omume na ụlọ na / oh nọ.
Ntuziaka ma ọ bụrụ na egwuregwu ga-eyigharịrị ya
1. Ọ bụrụ na egwuregwu agwụghị na njedebe nke oge edepụtara maka egwuregwu ahụ, onye nchịkwa ga-ekpebi na onye ọkpụkpọ ahụ nwere oge igwu egwu, "kaa akara" na-esote ya. Onye ọkpụkpọ ahụ ga-ede ihe ọ na-eme na mpempe akwụkwọ ya na ederede doro anya, tinye mpempe akwụkwọ ya na onye na-agba ya mgba na envelopu, mechie ya na mgbe nke ahụ gachara ịkwụsị elekere ahụ, na-amaliteghị elekere nke onye iro ahụ.
Ọ bụrụhaala na elekere anaghị akwụsị, onye ọkpụkpọ ahụ nwere ikike ịgbanwe usoro nzuzo ya. Ọ bụrụ na, mgbe onye ọka ikpe gwara gị na ihe ọzọ ị ga-eme bụ ihe nzuzo, onye ọkpụkpọ ahụ na-eme njem ahụ, ọ ga-edekọ ya na mpempe akwụkwọ ya dị ka ihe nzuzo ya.
EE. Onye nchịkwa ga-atụle na onye ọkpụkpọ nwere ikike ịme egwuregwu, onye chọrọ ịkwụsị egwuregwu ahụ tupu njedebe nke oge ahụ, ejirila oge niile fọdụrụ iji kwụsị nnọkọ ahụ.
2. Envelopu ga-egosi:
aha ndị na-egwu egwuregwu;
ọnọdụ tupu ebido nzuzo ahụ, na
oge ndị egwuregwu na-eji, na
aha onye ọkpụkpọ nke mere ihe nzuzo ahụ, na
nọmba nzuzo na-enye na
na-enye onyinye, ma ọ bụrụ na e mere atụmatụ ahụ tupu a kwụsị egwuregwu ahụ, na
ụbọchị, oge na ebe ịmalitegharị egwuregwu ahụ.
3. Onye na-ekpezi ikpe ga-achọpụta na izi ozi nke ozi dị na envelopu bụ eziokwu, ọ bụkwa ya ga-echekwa ya.
4.Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ na-atụpụta ihe osise mgbe onye iro ahụ mere ihe nzuzo ahụ, nkwupụta ahụ ga-adị ire ruo mgbe onye ọkpụkpọ ahụ nabatara ma ọ bụ jụ ya, dabere na Nkeji edemede 9.1.
5Tupu ịmalitegharị egwuregwu ahụ, a ghaghị itinye ọnọdụ ahụ tupu ebugharị ihe nzuzo na bọọdụ ahụ, na mgbakwunye, oge ndị egwuregwu na-eji mgbe a kwụsịrị egwuregwu ahụ ga-egosi na elekere.
6.Ọ bụrụ na tupu ịmalite egwuregwu ahụ, ndị egwuregwu na-ese site na nkwekọrịta nkwekọrịta, ma ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu ahụ kọọrọ onye ọka ikpe na ọ na-ahapụ, egwuregwu ahụ agwụla. A ga-emepe envelopu naanị mgbe onye ọkpụkpọ nke ga-aza nzaghachi nzuzo dị.
Ewezuga ikpe ndị a kpọtụrụ aha na isiokwu 5, 6.9 na 9.6, egwuregwu ahụ efunahụ onye ọkpụkpọ nke ndekọ ndekọ nzuzo ya
bụ ambiguous ma ọ bụ
bụ ụgha, nke mere na ihe ọ pụtara n'ezie agaghị ekwe omume igosipụta, ma ọ bụ
Ọ bụ iwu na-akwadoghị.
Ọ bụrụ na mgbe ịmalitegharị egwuregwu ahụ
onye ọkpụkpọ ịza nzaghachi nzuzo dị, envelopu meghere, emegharị ihe nzuzo na bọọdụ ahụ ma tinye elekere ya.
onye ọkpụkpọ nwere ịza nzaghachị nzuzo adịghị, elekere ya ga-adị. Mgbe ị rutere, onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịkwụsị elekere ya wee kpọọ onye na-ese okwu. Emepere envelopu ahụ wee mee ihe nzuzo na bọọdụ ahụ. Elekere gị maliteziri.
Onye ọkpụkpọ nke mere ihe nzuzo ahụ adịghị, onye na-emegide ya nwere ikike ịzaghachi na mpempe akwụkwọ ya, mechie mpempe akwụkwọ ya na envelopu ọhụrụ, kwụsị elekere ya wee bido onye mmegide ahụ, kama ịzaghachi n'ụzọ nkịtị. . N'okwu a, a ga-edebe envelopu ọhụrụ ahụ na njide nke onye na-ese okwu ma meghee mgbe onye iro ahụ bịarutere.
7. Onye ọkpụkpọ ahụ ga-efunahụ egwuregwu ahụ ma ọ bụrụ na ọ bịarutere n'ụgbọ ahụ ihe karịrị otu elekere oge maka ịmaliteghachi egwuregwu a yigharịrị (belụsọ na iwu asọmpi kwupụtara ma ọ bụ onye ọka ikpe kpebiri ma ọ bụghị)
Otú ọ dị, ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ kaa akara na nzuzo ahụ bụ ọkpụkpọ oge, egwuregwu ahụ ga - akwụsị ma ọ bụrụ:
onye ọkpụkpọ na-anọghị na ya bụ onye mmeri n'ihi eziokwu ahụ na njem nzuzo ya gburu onye iro ahụ, ma ọ bụ
Onye ọkpụkpọ na-anọghị na ya wepụta ihe osise n'ihi na njem ya 'rikpuru' eze nke onye iro ahụ, ma ọ bụ ọnọdụ dị ka akọwara na Nkeji edemede 9.6 rụpụtara na bọọdụ ahụ, ma ọ bụ
Onye ọkpụkpọ nọ ugbu a na bọọdụ ahụ efunahụ egwuregwu ahụ dị na edemede 6.9.
Ọ bụrụ na envelopu nke nwere ihe nzuzo ahụ apụla n'anya, a ghaghị ịmalitegharị egwuregwu ahụ site na ọnọdụ n'oge nkwụsịtụ yana yana oge elekere anya dị ka oge ịkwụsị. Ọ bụrụ na oge ndị egwuregwu na-eji enweghị ike ịtọgharịa, a ga-edozi elekere ahụ na ezi uche nke onye nchịkwa. Onye ọkpụkpọ ahụ mechiri ihe nzuzo ahụ na-eme njem ahụ na-azọrọ na ọ bụ "nzuzo" na bọọdụ ahụ.
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịmaliteghachi ọnọdụ ahụ, akagbu egwuregwu ahụ, a ga-egwu egwuregwu ọhụrụ.
Ọ bụrụ na, mgbe ịmalitegharị egwuregwu ahụ, oge ejiri eme ihe na-ezighi ezi na akara elekere ọ bụla ma ọ bụrụ na otu n'ime ndị egwuregwu ahụ gosipụta ya tupu ha emee njem mbụ ha, a ghaghị idozi njehie ahụ. Ọ bụrụ na achọpụtaghị njehie ahụ, egwuregwu ahụ ga-aga n'ihu na-enweghị mgbazi, belụsọ na onye na-ese egwuregwu ahụ ghọtara na nsonaazụ ya ga-adị oke njọ.
Oge elekere egwuregwu ọ bụla kwụsịtụrụ ga-achịkwa elekere refirii. A ga-ekwuputa oge mbido na njedebe.